'ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ခံစားချက် တွေကို ပရိသတ်တွေကို ချပြချင်တာကြောင့် ရိုးသားစွာနဲ့ပဲ သီခ?? - Yangon Media Group
ကိုယ်ရင်းနှီးထားပြီး ဖန်တီးထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေကို အွန် လိုင်းပေါ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပရိသတ်တွေ အရမ်းအားပေး တာကြောင့် ဝမ်းသာရပါတယ်ဆိုတဲ့ တေးသံရှင် ဝိုင်းလေးနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း ..။
မေး – ဝိုင်းလေးအခုနောက်ဆုံး အွန်လိုင်းပေါ်တင်ထားတဲ့ သီချင်းလေးလည်း ပရိသတ်တော်တော် အားပေးတယ် နော်။
ဖြေ – ဟုတ်။ ပရိသတ်တွေကိုလည်း အခုလိုအားပေး တာကြောင့် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဝိုင်းလေး အခုနောက်ဆုံး အွန်လိုင်းပေါ်တင်ထားတဲ့”လွတ် လပ်ရေး”ဆိုတဲ့သီချင်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ တေးရေး ဆရာကတော့ ကိုဝေကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း တော်တော်လေးကို အားပေးကြတာတွေ့ရပါ တယ်။ ဝိုင်းလေးကိုယ်က အင်တာနက်မှာ Free Download Link ပေးရတာ ဆိုတော့ ကိုယ်ရင်းနှီးထားတဲ့ အချိန်တွေ ငွေနဲ့ဖန်တီးထား တာလေးတွေကို ဒီအွန် လိုင်းကနေပဲ တင်ရ တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီလို ကိုယ်က တင်လိုက် တဲ့အချိန် မှာ ပရိသတ်တွေက အများကြီးအားပေးတော့ အရမ်းကို ဝမ်းသာရ ပါတယ်။
မေး- အခုလိုသီချင်းတွေကို အွန်လိုင်းပေါ်တင်တော့ ကိုယ်ရင်းနှီးထားတာတွေက ဘယ်လမ်းကြောင်းက ပြန်ရမလဲ။
ဖြေ- ဝိုင်းလေးတို့က သီချင်းကို MTV မရိုက် ဘဲ Audio ကိုပဲ အွန်လိုင်းပေါ်ကို ရောင်း မယ်ဆိုရင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသိပ်မရှိဘူး။ ဒီ သီချင်း မပေါက်သွားရင်တောင်မှ ရင်းနှီး ထားတာသိပ်မရှိတာကြောင့် ဥပမာ အနည်း ဆုံး ၁ဝ သိန်းလောက်ရှိမယ်။ MTV ရိုက် လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်က ပရိသတ် ကြိုက်လောက်မယ်ထင်ပြီး ကိုယ်က ရိုက်လိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ သိန်း ၅ဝ လောက်ကုန်သွားတယ်။ ဒါကို Free ပေးလိုက်မယ်။ ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရင် လည်း ၆ မိနစ်စာလောက်ပဲရှိမယ်။ ကိုယ်ပြန်ရတာက ဘာလဲဆို တော့ ပရိသတ်ကြိုက်သွားတယ်။ နောက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် Share ကြတယ်။ အဲဒီမှာမှ ကံကောင်းလို့ ပရိသတ်တွေကြိုက်မယ် ဆိုရင် ပွဲတွေဆိုရမယ် အဲဒီကမှပြန်ရမယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီလို ရိုက်ပြီးမှ ပရိသတ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း ကံပါပဲ။
မေး- နောက်ပိုင်းရော သီချင်းတွေကို အခွေအဖြစ်ထုတ်ဖြစ်ဦး မလား။
ဖြေ – ညီမရဲ့ ဒုတိယအခွေကတော့ Audio ပဲထွက်သေးတယ်။ DVD မထွက်သေးဘူး။ DVD ကိုတော့ ရိုက်နေတာ ရှိပါတယ်။ ဒီနှစ်ရဲ့ နိုဝင်ဘာဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီဇင်ဘာလလောက်ဖြစ်ဖြစ် ထွက်နိုင် အောင်လုပ်နေပါတယ်။ အခုခေတ်က ညီမထင်တာကတော့ CD တွေဝယ်နားထောင်တဲ့ခေတ်ကတော့ ကုန်သွားပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ Stick နဲ့ နားထောင်တဲ့ခေတ်ကိုပြောင်းနေပြီလို့ထင်ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ ဆိုလည်း အဆင်ပြေတယ်။ အွန်လိုင်းဈေးကွက်ကို သွားနေတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ညီမ သီချင်းလေးတွေတင်တယ်ဆိုတာကလည်း ပရိသတ်ကိုချစ်တယ်။ ပရိသတ်အဆက်မပြတ်သွားအောင် တင်ဖြစ်တာ ပါ။ မှတ်တိုင်တစ်ခုဆိုတာကတော့ အဆိုတော်တိုင်းမှာ ရှိသင့်တယ် လို့ထင်ပါတယ်။ အခွေလည်းထုတ်သင့်တယ်။ နောက်ပိုင်းတိုးတက် လာရင် ဥပဒေတွေလည်း ထိရောက်မှုရှိလာရင် ညီမတို့အတွက် ရ ပိုင်ခွင့်တွေလည်း ပိုများလာမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မေး – သီချင်းတွေလည်းကိုယ်တိုင်ရေးတယ်ဆိုတော့ သီချင်းရေး တဲ့အပိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘယ်လောက်အထိ ယုံကြည်မှုရှိလဲ။
ဖြေ – တေးရေးဆရာ တစ်ယောက်အနေနဲ့တော့ သီအိုရီပိုင်းကို မနိုင်သေးပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကို ပရိသတ် တွေကို ချပြချင်တာကြောင့် ရိုးသားစွာနဲ့ပဲရေးဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်နဲ့အကြိုက်တွေ တစ်ထပ်တည်းကျသွားတော့ အရမ်းပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ အခြားအဆို တော်တွေလည်း သီချင်းတွေရေးဖို့ လာအပ်ကြ တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ သူများကို ရေးပေးဖို့ ကတော့ သီအိုရီပိုင်းနိုင်မှရမှာဖြစ်တာကြောင့် ရေးပေးဖို့ ခဏစောင့်ခိုင်းထားပါတယ်။
'ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တွေကို ရှိန်တာမျိုး၊ လန့်တာမျိုးကြောင့် အိုက်တင်မလိုက်နိုင်တာမျိုးတွေလ??